Vaovao - Inona no atao hoe amplifier？
Inona ny amplifier？
Fitaovana Karaoke ankoatry ny mpandahateny, ny fitaovan'ny mozika dia tena zava-dehibe, ny kalitaon'ny fanamafisam-peo ihany koa no tena zava-dehibe. Ny fiasan'ny KTV dia tokony ampifangaroina amin'ny haben'ny efitranonao sy ny fitaovanao haingon-trano. Ny faritra samihafa amin'ny efitrano dia tokony mampiasa fanamafisam-peo isan-karazany. Tandremo ny fampifangaroana ny fanamafisam-peo sy ny mpandahateny.
Ny herin'ny amplifier karaoke mitambatra namboarina tany am-piandohana dia kely dia kely, ary ireo mpandahateny mpandahateny dia mpandahat-kery kely manana fahatsapana avo. Ny olana mahazatra indrindra dia ny fidradradradran'ny valin-kafatra. Ny antony dia ny tsy fahampian'ny tahiry herinaratra rehefa avo ny habetsahan'ny vokatr'izany, miteraka fanodinkodinana famantarana lehibe. Ankoatr'izay, ny fanodikodinan'ny mpandahateny avo lenta dia ny fanehoan-kevitra, ary ny fanodinkodinana dia mihalehibe boribory, ka mitarika fidradradradrana. Amin'ny ankapobeny, ny tena antony mahatonga ny fieritreretana dia ny fanodinkodinana. Ny fampihenana ny fanodikodinana dia afaka mampihena ny mety ho fidradradradran'ny valiny. Na izany aza, tsy azo lazaina fa tsy hisy ny fidradradradran'ny valiny. Amin'ny sehatra ahazoana tombony azo ihany, rehefa lehibe ny tombony, dia hitarika fidradradradrana amin'ny valiny. Midika izany fa ny amplifier karaoke dia tokony hisafidy hery avo araka izay tratra. Na izany aza, arakaraka ny haavon'ny herin'ny fanamafisam-pahefana no mampatanjaka ny fahatsapana feo. Amin'ny alàlan'ny traikefa azo ampiharina, ny fantsona tsirairay ao anatin'ny 8 Ω 450W dia azo fidina.
Ny efitrano latsaky ny 18 metatra toradroa dia fanamafisam-peo karaoke nentin-drazana voaorina tsara. Na izany aza, ny akony nentim-paharazana dia hiteraka tsy fahazoana antoka ny vokany tsara, ary ny fepetra takiana amin'ny fanesorana ny hetaheta an'ny vahiny tsirairay avy dia mety hahatonga ny mpitantana tsy ho afaka hamaritra ny vokany amin'ny toerana mitambatra, izay hahatonga an'i DJ ho reraka koa. Ny antony faharoa hampiasana ny fanamafisam-pahefana miaraka amina processeur DSP dia ny fantsom-pamokarana effet echo nentin-drazana dia misy elanelam-potoana fohy (latsaky ny 8kHz) sy ny faharetan'ny santionany ambany, izay mahatonga izany tsy fisian'ny antsipirian'ny tontolo iainana mitaky fivoahan'ny herinaratra avo. Ny fahita matetika an'ny DSP 48K sy ny elanelam-potoana 20hz-23khz dia mitondra kalitaon'ny feo tsara kokoa ary dinamika malefaka sy ambany matetika. Izany no antony tsy ahafahantsika mihira olona, ​​raha vantany vao nampiasa ny fanamafisam-peo DSP, nohamafisina tampoka ny feon'izy ireo, manintona bebe kokoa, manintona kokoa, mahazo aina kokoa.
Ny antony fahatelo ampiasana ny fanamafisam-pahefana miaraka amina processeur DSP dia ny processeur DSP dia afaka mitahiry tahirin-kevitra marobe, ary afaka mitondra ny vokatra "reverb" tena azo ampiasaina ihany koa, manome mpanjifa k-traikefa bebe kokoa, mahatsapa tena ny karaoke self-service an'ny mpanjifa, ary mampihena be ny fangatahan'ny serivisy DJ. Ankoatr'izay, miaraka amin'ny fiasa fanombohana mandeha ho azy ny rafitra VOD, ny vokatry ny efitrano tsy miankina dia mety hahatratra ny fiandohana ihany koa amin'ny ambaratonga mitovy. Mba ho ara-drariny, ao amin'ny efi-trano tsy miankina 18 metatra toradroa, raha toa ka manombatombana ny kalitaon'ny feo fotsiny isika, dia tsy ambany noho ny an'ny DSP ny vokatra eko nentim-paharazana izay namboarina tsara, fa toa matevina sy malefaka izy io. DSP dia manana tsiro nomerika kely, izay tsy dia malefaka loatra. Raha ahitsy amin'ny 8kHz ny LPF an'ny DSP dia miharihary kokoa ny fampitahana azy roa. Ny tena maha samy hafa azy dia ny tanjaka ambany, ny hafanam-po ary ny hateviny.
Ny fisafidianana ny fanamafisam-peo karaoke mitambatra sy ny fampiraisana mialoha sy aoriana dia miankina indrindra amin'ny filan'ny efitrano fampiharana. Ho an'ny efitrano ao anatin'ny 18 metatra toradroa dia asaina mifidy DSP natambatra fanamafisam-peo karaoke manodidina ny 200W; ho an'ny efitrano misy velaran-tany mihoatra ny 18 metatra toradroa ka hatramin'ny 25 metatra toradroa, ny fantsom-pamokarana herinaratra karaoke 200 W DSP telo dia azo fidina hampitombo ny mpandahateny afovoany ho toy ny fanampim-peo avy amin'ny olona mid bass; ny efi-trano manokana misy metatra toradroa mihoatra ny 25 metatra toradroa dia tokony hojerena Araka ny tena endrik'ilay efitrano, ny anton-javatra toy ny haavon'ny tsindry feo, ny fitoviana eo amin'ny sehatry ny feo ary ny fametrahana ny saha eo anelanelan'ny honenana. Ny fahefana sahaza dia voafantina amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny toetran'ny mpandahateny amin'ny fanamafisam-pahefana ambaratonga aoriana an'ny mpandahateny lehibe. Ny fanamafisam-pahefana haavo haino aman-jery multi-fantsona dia azo ampiasaina hampihenana ny vidin'ny mpandahateny ambany hery fanampiny.
Mikropono Portable Karaoke, Miracast Display, Karaoke Mikrofona Wireless, Mihirà Magic Karaoke Player,